Nockherberg Starkbierfest - Munich Strong Beer Festival | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Nockherberg Starkbierfest – Munich Strong Beer Festival
Uninzi lwabahambi abathanda ibhiya baneMunich ephezulu kuluhlu lwezinto abazakuzenza. Kuba eqinisekileyo ukuba Oktoberfest wayeza kuba khona kakhulu, kodwa Nockherberg Starkbierfest – Munich Strong Beer Festival kuzisa into engaphezulu. Hayi, hayi izihlwele. Niya amava isiqingatha ezininzi. Kodwa umqombothi kabini amandla! Izandi ngathi indlela egqibeleleyo sokukhaba EyoKwindla yaye Spring, kuthi!
eMunich, capital eBavaria kaThixo, likhaya izakhiwo kwiinkulungwane ubudala kwaye iimyuziyam amaninzi. Esi sixeko saziwa ngokuba umbhiyozo yayo yonyaka Oktoberfest kunye neeholo zawo beer, kuquka i Hofbrauhaus esidumileyo, yasungulwa ngo 1589. In the Altstadt (Town Old), kumbindi weMarienplatz isikwere siqulethe iimpawu zomhlaba ezifana Neo-Gothic Neues Rathaus (Iholo yedolophu), nge ethandwayo glockenspiel ibonisa ukuba chimes kwaye reenacts amabali ukususela ngenkulungwane ye-16.
Ingaba eli xesha yakho okokuqala ngokutyelela eMunich? Uya kukuvuyela ukwazi ukuba kukho undwendwe-friendly isixeko kanye, phantse kuzo zonke iinkalo. It has a esebenza kakhulu iziseko, inikeza uluhlu olubanzi zombini umtsalane ngaphakathi nangaphandle, i sezulu zamva kwiindawo ezisemantla ka Jemani kwaye super Kulula ukuhambahamba kwaye ufike eNockherberg Starkbierfest – Lo mnyhadala ibhiya olomeleleyo eMunich.
Kuthekani NOKUNGALWAZI Ulwimi?
Musa ukuthetha isiJamani okanye isiBavaria? Akukho ngxaki! Uninzi lwabaselula luthetha isiNgesi, kodwa ukwazi ukusebenzisa isuntswana German (okanye wohlobo, ukuba ulinge) kuyancomeka yi bakule. Eli lizwe unalo igama lokuba enesimo, kodwa kude inyaniso. Munich bendawo banobubele yaye ziluncedo xa kokuba aqalise ukuba ubazi. Enye yezinto ezifunekayo kunokwenzeka “uloyikiso lwenkcubeko” kungaba njani nkqu kwimimandla ephithizela edolophu, ukuba uyakwazi ukufumana cwaka kakhulu ngobusuku losuku lweveki ebusika okanye ngeCawa; Munich uyakwazi ukunikela iingenelo ezininzi lobomi basedolophini (indawo zokutyela ezinhle, izakhiwo ezihle, Okuninzi kwe izinto zokwenza) thabatha a lot of umsindo, yasemzini, ukugxininisa. Esi sixeko features ilungileyo siyibambe ezininzi: i ezidolophini indawo, indawo enhle zemvelo, yeenkcubeko ngamazwe ezihlangene ezininzi zecawa iindlela wohlobo yokuphila. Kwaye Ayisafuni nakucaciswa yona into le beer ehlabathini-idume isizathu!
EHamburg eMunich Uqeqesha
Leipzig eMunich Uqeqesha
EGhent ku eMunich Uqeqesha
A eziyimfihlo LOCAL
Kuba malunga neeveki ezintathu entwasahlobo ekuqaleni, utshwala yonke eMunich kumisa neeholo zabo beer.
Lo mnyhadala enamandla utywala eka Munich ngathi izitiya utywala kunye Oktoberfest. Inyaniso, lo mnyhadala webhiya unokuba ngowesixeko eyona mfihlo igcinwe kakuhle. Yinto kwanabo omdala kunawe Oktoberfest, yaqala phakathi kwiminyaka yee-1600, yi iimonki Paulaner Munich kunye Paulaner Nockherberg na indawo yokuqala umthendeleko utywala kakhulu eMunich kaThixo!
Lendela amaqhinga elenziwa isiselo yotywala ukuba ukuphila phakathi yokuHlawula ukuzila, wabasikelela, wabathiya bathathwe kum-up 'utywala kayise wabasikelela ngayo' okanye 'ioli engcwele St. Francis '. Ekugcineni, wahlala phezu 'Salvator' - Latin umsindisi.
Salzburg ku eMunich Uqeqesha
Bremen ku eMunich Uqeqesha
Kwaye apho kanye kanye le Munich Strong Beer Festival zivela?
Elona bali liqhelekileyo lemvelaphi ye starkbier libali elilula leemonki ezilambileyo. Ukuba ukudla ngexesha leNzila, ithe waqala ukuba asile starkbier njengendlela kroba ukufumana banele calories. Kwakhona, Bulelani isiqulatho eqinileyo eliphezulu lichithakale (yaziwa njenge Wort), starkbier baba zinakanwa ukutya ulwelo.
Kodwa ngaphaya koko, Starkbier wenza, kanjalo, ube alcohol eliphezulu (ezisukela 7.5%-9%). NgokoMthetho bubumnandi, oko malty ngokumangalisayo (mhlawumbi ndingathi deceivingly) ngokugudileyo kunye neziphumo zayo nakanjani 1000% enyakanyakeni yonke kuwe. like, "Sicela Nkosazana, ayeke dancing phezu kwetafile - wena scaring abantwana "alawule phezu kwakho. Wena ziyaliwe ziye.
Ukuba azihlanganisele izinto ukuya: starkbier i beer enamandla, yomelele ngaphakathi umxholo wotywala kodwa nakwizinto eziqinileyo ezichithakeleyo, oko ndikuzalisileyo phezulu kwaye sonile kuwe phezulu. Wena ziyaliwe ziye!
Iingcebiso ngokukhawuleza kuMnyhadala weBhiya eMunich
Nangona ngemixokelelwane ezinkulu ivenkile enkulu kunye kuthengela zokuphuma kusenokwenzeka ukuba ukwamkela ikhadi lakho lokuthenga ngetyala, uninzi lweevenkile kunye neevenkile eMunich ziya kwamkela kuphela imali okanye amakhadi e-EC (efana amakhadi debit). Qinisekisa ukuba euro elaneleyo xa kusetyendziswa ngemihla.
strong olujoliswe beer
I Starkbieranstich ibhekisa olujoliswe ka beer strong (ngamanye amazwi. evunyelwe nomgqomo) - ukuba uhlobo into enkulu eMunich uphawula ukuqala Starkbierfest. E Paulaner am Nockherberg, babhiyozela olujoliswe ka Salvator butywala obomeleleyo uyose zomculo yezopolitiko.
Abantu ngokoqobo ukugcwalisa iholo yabo utywala ngabezobupolitika zasekuhlaleni yaye zihlekisa kubo ingoma kunye dramatics. Ukuba izibiliboco bazingenele yintoni lo mcimbi kufana, nanku ikliphu YouTube ukusuka kunyaka ophelileyo.
Zurich eMunich Uqeqesha
Mainz eMunich Uqeqesha
Augsburg eMunich Uqeqesha
Ufuna babhukishe uloliwe itikiti ku eMunich? Emva koko intloko phezu ku SaveATrain apho uya kufumana itikiti lakho imizuzu kunye No peaky, ezongezelelweyo, kunye nemirhumo efihliweyo!
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye itekisi kunye sinike nje ngetyala nesihlanganisi kule post blog, okanye cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fnockherberg-starkbierfest-munich-beer-festival%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
#Beerfestival #Umthendeleko webhiya onamandla waseNockherberg #strong olujoliswe beer #UhamboMunich Ukuhamba kweBhiya umnyhadala wokusela eMunich